स्थानीय चुनाव चार चरणमा ः प्रमुख आयुक्त – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ बैशाख १२, शुक्रबार ००:५९ गते
भरतपुर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय निकायको निर्वाचन कम्तीमा चार चरणमा गर्नुपर्ने बताएका छन् । चितवन क्षेत्र नं. ४ मा हुन लागेको संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान सम्बन्धी मतदाता शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमको बिहीबार भरतपुरमा उद्घाटन गर्दा उप्रेतीले सो विचार राखेका हुन् ।
स्थानीय निकायको चुनावले नगर, गाउँ र वडा तहसम्म गरेर चार हजार ७२१ स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने भएकाले समय र तयारी धेरै हुनु पर्ने उनले बताए । स्थानीय निर्वाचनका लागि ३७ हजार किसिमका मतपत्र छाप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसकारण एकै चरणमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्भव नभएको उनले बताए ।
संविधानसभा सदस्य पदको निर्वाचन एक केन्द्रीय सरकार निर्माणका लागि थियो । त्यसका लागि पनि २४१ प्रकारका मतपत्र छाप्नु परेको उनले बताए । पार्टीको संख्या पनि बढ्दै गएको र लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा चुनाव नभएकाले पनि असहजताहरु थपिएको उप्रेतीले बताए संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले निर्वाचन हुनेमा उनी आशावादी देखिए । तर समय अभाव रहेकाले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभएको पनि उनले बताए ।
मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगलाई कम्तिमा पनि तीन महिनाको समय आवश्यक पर्ने उनले बताए । वर्षायाममा चुनाव गर्न नसकिने भएकाले कात्तिकयता निर्वाचनको सम्भावना नरेहको उनले बताएका हुन् । कात्तिकमा चुनाव गरे पनि मिति भने अहिले नै घोषणा गरे पनि फरक नपर्ने उनको धारणा छ ।
मिति घोषणामा सरकार वा संविधानसभामा सहभागि सवै दलको सहमति भए उत्तम हुने वा अधिकांश दलको सहमतिमा मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा लाग्न आवश्यक भएको उनले बताए । संविधान बनेपछि भने अवधि पुगेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको मिति तोक्न स्वतन्त्र हुने उनले बताए ।
उद्घाटन कार्यक्रमअघि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले एकभन्दा बढी ठाउँबाट चुनावमा उठ्ने चलन उपयुक्त नभएको धारणा राखेका थिए । यस्ले खर्च बढाउने र प्रतिनिधित्वमा पनि असर पार्ने उनको धारणा थियो । एक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गारउँदा निर्वाचन आयोगको मात्रै करोडभन्दा धेरै खर्च हुन्छ ।
मंसिर चारमा भएका संिविधानसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. ४ बाट नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सभापति शुसिल कोइरला विजयी भएका थिए । उनी बाँकेबाट पनि सोही पदमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनले चितवनको क्षेत्र नं. ४ छाडेका कारण त्यहाँ उप निर्वाचन हुन लागेको हो ।
संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने प्रवधान नराख्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव समेत गरेको उप्रेतीले जानकारी दिए । असार ८ मा देशका चार क्षेत्रमा उप चुनाव हुँदै छ । उप चुनाव हुने सवै क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिनबाट भोट हाल्ने प्रवन्ध निर्वाचन आयोगले मिलाएको छ ।